Accueil > Gazetin'ny nosy > Ambalavao Fianarantsoa : Andrin-jiro 4 no nodonin’ny helikaopteran-dRajaonarimampianina
Ambalavao Fianarantsoa : Andrin-jiro 4 no nodonin’ny helikaopteran-dRajaonarimampianina
Tao amin’ny distrikan’Ambalavao any Matsiatra Ambony (Fianarantsoa) omaly tolakandro no naaovan’ny kandida Hery Rajaonarimampianina fampielezan-kevitra. Tao andamosin’ny lapan’ny tanàna no nifamotoana tamin’ny vahoaka izy. Vory lanona ny ambanilanitra sataria nambara fa hanafana ny fotoana ny mpanan-kanto malaza “Black Nadia”. Rehefa tonga Ingahy Rajaonarimampianina dia siotsioka sy horakoraka no nanehoan’ny maro ny tsy fankasitrahany, ary tsy vitsy ireo nitsangana nandeha nisintaka ny toerana.
Tetsy ankilany, nihazakazaka nizara “tee shirt” sy vola 800 Ariary isan’olona ny komity mpanohana, saingy izay nahazo dia vao mainka lasa niala teo, sady nanaisotra ny akanjo “tee shirt”.
Nokianin’ny maro koa ny faneren’ny komity mpanohana an-dRajaonarimampianina an’ireo mpiasam-panjakana misahana ny fanentanana ara-pahasalamana, izay nasaina nanentana teny andampihazo.
Fa tamin’ny fotoana nidinan’ny fiaramanidina helikaoptera nitondra ny kandida Rajaonarimampianina tao an-toerana dia andrin-jiron’ny Jirama niisa 4 no nodonin’ilay fiaramanidina ka nitera-pahavoazana tao an-tanàna satria nitarika fahatapahan’ny herin’aratra izany.
Rehefa mandre izany ny mpanara-maso dia maro ny nanamarika miharo naneso hoe “dia ahoana hoy ny “Aviation civile de Madagascar (Acm)” amin’izany?” Sa efa tsy misy idiran’ny “Acm” intsony izany fa efa nomena alalana hisidina ny fiaramanidina helikaopterany dia andraikitr’izay nahazo alalana ny miantoka ny fahavoazana aterany?